Education | PRO-X Software Solution
ဆက်သွယ်ပြောဆိုတတ်တဲ့ အရည်အချင်း ပိုကောင်းလာစေဖို့
ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်တတ်ခြင်းဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်ဆံရေးနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာပါ အရေးကြီးတဲ့အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းတွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြထားတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကျမ်းကျင်မှုအခြေခံများက။ ဆက်သွယ်ခြင်း (Communication) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်။ ။ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာ မိမိပြော ချင်တာကို သူများနားလည်သိရှိသွားအောင် စာ...
Visits : 3690
စာဖတ်ခြင်းက သင့်အတွက်ကောင်းစေတဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ ချက်
အောင်မြင်သူအများအပြားဟာ သူတို့ချမ်းသာနေနိုင်တာဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် စာဖတ်ခြင်းကြောင့်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဒီနေ့ချက်ချင်းကိုပဲ စာတစ်အုပ်လောက်စဖတ်သင့်တဲ့အကြောင်း ၅ ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။၁။ စာဖတ်ခြင်းက သင့်ကို အသက်ပိုရှည်စေနိုင်တယ်။စာဖတ်တဲ့လူတွေဟာ (လိင်၊ ဥစ္စာဓန၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ မဆိုင်ဘဲ) စာမဖတ်တဲ့လူတွေထက် အသက်နှစ်နှစ်ခန့်ပိ...
Visits : 5925
ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆေးရုံထဲကို အလျှင်အမြန်နဲ့ ပြေးဝင်သွားတယ် ...။ အရေးကြီး ခွဲစိတ်မှုတစ်ခု ချက်ချင်းလုပ်ဖို့ လိုအပ်လို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်တဲ့အတွက် ဖုန်းရရချင်း ချက်ချင်းအဝတ်အစားလဲပြီး ရောက်လာတာပါ ...။ ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ခွဲစိတ်ဆောင်များ ရှိရာကို ပြေးသွားခဲ့ပါတယ် ...။အထဲရောက်တော့ လူမမာကောင်လေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ နံရံကိုမှီပြီး ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ သူ့...
Visits : 4602
ဆံသဆိုင် (ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်) တစ်ဆိုင်တွင်&nbsp;ဆံပင်ညှပ်သူများနှင့် စည်ကားနေ၏။ဆံပင်ညှပ်ဆရာတစ်ယောက်မှ လွဲပြီး ကျန်ဆံသဆရာ&nbsp;အားလုံးမှာ ဆံသပေးနေကြလေသည်။ထို ဆံသဆရာလူငယ်လေးတစ်ဦးသည်&nbsp;စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းများစွာဖြင့် ဆံပင်လာညှပ်မည့်&nbsp;ဧည့်သည်ကို မျှော်နေမိ၏ ။ယနေ့မှစကာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က သူ့ကို ဆံသခွင့် ပေးလိုက်သည်။သူသည် ထိုဆိုင်တွင် အောက်ခြေ သိမ်းအလုပ်မ...
Visits : 4563
တခါမှာ ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းကို သတင်းထောက်တွေက မေးခွန်းတခု မေးတယ်။မေးခွန်းက လွယ်လွယ်လေးပါ။ တမိုင်မှာ ပေပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲတဲ့။ အိုင်းစတိုင်း မဖြေနိုင်ပါဘူး။ မူလတန်းကျောင်းသားတယောက် လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေနိုင်တာလေးကိုတောင် ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး မဖြေနိုင်ဘူးဆိုပြီး သတင်းထောက်တွေက သူ့ကို ဟားတိုက်လှောင်ပြောင်ကြတယ်။ အိုင်းစတ...
Visits : 7741
A PESTEL analysis isaframework or tool used by marketers to analyse and monitor the macro-environmental (external marketing environment) factors that have an impact on an organisation. The result of which is used to identify threats and weaknesses which is used inaSWOT analysis.PESTEL stands for:P – PoliticalE – EconomicS – SocialT – Technologi...
Visits : 13609
1 -6of ( 11 ) records
History of Computer University